Ka Faa’iideyso Su’aalo Iyo Jawaabo Aqoon Kororsi Ah: | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Aug 11, 2015 - 40 Jawaabood
Waxaad sheegtaa magaca Malaga suurta afuufay oo kamid ah mallaigta
J – Malaga suurta afuufaya waxaa la yiraahdaa Israa’fiil
S – Waxaad sheegtaa geedka ka baxa Jahanama bartankeeda?
J – waxaa la yidhaahdaa Zaquum.
S – Waxaad sheegtaa macnaha magaca Jibriil?
J – Macnaha Jibriil waa Adoon, sida uu ku fasiray Ibnu Cabaas.
S – Waxaad sheegtaa masaajidak salaada lagu tukadaa ay u dhiganto ajar cumro?
J – Waa masaajidka Qubaa.
S- Waxaad sheegtaa maydka xalaasha ah?
J- maydka xalaasha ahi waa ””Ayaxa iyo Kaluunka.
S – Waxaad sheegtaa dhiiga xalaasha ah?
J – dhiiga xalaasha ahi waa Beerka iyo Beer-yarada.
S – Kumuu ahaa ninkii dakhray Nebiga(NNKHA), dagaalkii Uxud?
J – Wuxuu ahaa Ibnu Qimah.
S – Kumuu ahaa yuhuudigii Nebga(NNKHA),sixray?
J – Wuxuu ahaa Lubeyd binu Acsam.
S – Waxaad sheegtaa ninkii jebiyey dhooshii nebiga(NNKHA), dagaalkii Uxud?
J – wuxuu ahaa Cuqba binu abdi waqaas.
S – Waxaad sheegtaa gabadhii Alle u waxyooday?
J – waxay ahayd Nebi muuse hooyadii
S – Waxaad sheegtaa magaalada aan cudurka daacuunku gelin?
J – waxaa weeye Magaalada Madina Almunawara.
S – Waxaad sheegtaa suuradii sababta u ahayd inuu soo islaamo Cumar binu khadab?
J – waxay ahayd suuradu Daahaa.
Fikradaha Akhristayaasha (40)
Waan kahelay web kan
Jir oo joog
Masha allah jazakumu allahu kheyr waan kaheley waayo aadban u xiiseya siirada nabigeena nnkh iyo asxaabtiisa amaba suaalooyin aadbaana ujeclahay illahow kheyr sii inta kheyrka faafisa oo u naxariiso amiin
Abdiweli Abdilahi Dirie Gaas says:
Aad Iyo Aad Ayeey Uficn Tahy Mann sha Allah Thankz
Waan Kahelaa Man sha Allah Hadan Ahy Abdiweli Gaas Iyo Dhamn Ba Muslms Ka Adunka
shuhayba maxamed says:
mansha allah s
Mashaa allah jazakalahu khayr
Ibrahim wadani says:
abdi wahaab mohamed abdi gado says:
maxamed shekeye says:
xasan yunis says:
Maxamed muuse says:
Man sha alaaj
Cabdi Cabdiraxman Cabdi says:
Masha allah jazakumullah
shariif yusuuf jimcale says:
waxan ka hailnaa su aalo iyo jawaabo muhiim ah mahdsanid
halyeyga himilada hibeeya says:
jazakalh khayra my team sahal software
pro Aadan sulaiman says:
nuur sharif says:
masha Allah ajar Allaha idinkasiiyo
yusuf maxamed idow says:
waad mahadsantihin sahal software
Axmad ak says:
Bro noo soo kali sualo iyo jawaabo aad u adag iyo kuwo ku saabsan dalkeena
ali abdi gurey says:
Sxp aniga muqdishaan joogaa barnaamijkaan waa ka helay waana la dhacay
marka sxp aniga waxan ahay nin iska dan yar ah wlhi sxp
lkn 1$ waan awoodaa bishii marka intee idiinku soo diraa
EVCPLUS. ma isticmaashaa
zultan mohamed eteniouZ says:
Now waa maqli jiray laakiin mahadsani
abdi rahman sheikh adan says:
msh allh waad mahadansantihiin
Masha Allah jazakalah
Hibo farah says:
Manch alh alle ha idi sharfo
cabdi qani says:
maasha allaah waa cashar fiican
mohammednor siraj kerow says:
Masha allah website aad iyo aad ayuu u fican yahy in laga faideysto aqoon guuud wanna ku faraxsanahy alx wanna soo dhaweyna
Dhool yare says:
Waa maxay shayga dumarka markasta ay arkaan ragana ay hal mar arkaan?
degan xaaji jaamac says:
Masha allaah waa su aalo muhiim ah barakallaah
Waan ladhacay masha allah
abdisalaam jama yusuf says:
waan ka helay aad ayad umahad santihiin
waxaan jooga ethiopia sen idinkula.soxidhiidhi karaa
Aad iyo aadbaan ugu faa iiday wayo
Waxadan arag inaad kuma qasho laga
Maasha allaah allah ya xifdaka